I-infographic: Isitayela sokusebenza seselula
NgoLwesihlanu, Agasti 12, 2011 NgoLwesithathu, Okthoba 26, 2011 U-Adam Encane
Umphathi Wokuxhumana Komphakathi I-Gist (esanda kutholwa yi-RIM) hlanganisa le infographic ku-Mobile Workstyle. Ngokungafani ne- UDell Infographic kubasebenzi beselula le infographic igxile kakhulu emikhubeni nasezintandokazi zesisebenzi esingumahamba nendlwana kunokuphikisana nokuthi kungani inkampani kufanele icabangele ukuhlanganisa abasebenzi babo. Njenge:
Ama-65% wabasebenzi abahambahambayo sebenzisa ithebhulethi
32% wabasebenzi emhlabeni jikelele manje bathembele kubo ngaphezu kwesisodwa iselula phakathi nosuku olujwayelekile lomsebenzi.
Abasebenzisi abangena i-imeyili yeselula inyuke ngo-36%
Buka okuningi ..
Ubuchwepheshe beselula buguqula indawo yokusebenza. Ishintshe kanjani eyakho?
Ungadangali Ngemidiya Yezokuxhumana